Ọhụrụ Blackberry mobiles nwere ike ọkọnọ izu na-abịa | Akụkọ akụrụngwa
Asịrị na ịdị adị nke igwe ọhụụ sitere na ụlọ ọrụ Blackberry na-ada ụda ruo ọnwa ole na ole na ọ dị ka anyị ga-ahụ mobiles ndị a tupu njedebe nke afọ, ọ bụ ezie na ọ dịghị onye maara ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịzụta ha n'ọnwa a, afọ a ma ọ bụ nke na-esote .
La Crackberry weebụ egosila na Blackberry ọnụ na gam akporo ga-ewetara ya na izu na-abịa site Ralph Pini, COO nke Blackberry. O yikarịrị ka ọ ga - abụ Blackberry Mercury nke anyị na - ebu ụzọ hụ, ama ama ga - enwe kiiboodu Blackberry, mana ọtụtụ na - atụ aro na ọ ga - abụ Blackberry Neon ma ọ bụ Blackberry Argon.
N'ọnọdụ ọ bụla, CEO nke ụlọ ọrụ ahụ achọghị ikwu ihe ọ bụla banyere okwu ahụ na njedebe ikpeazụ ọ gara, ihe omume na nchekwa na New York. N'ime omume a, a jụrụ ya banyere ngwaọrụ ọhụụ ma ọ nweghị nkwupụta ọ bụla na-ekwupụta na ụlọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ ihe na ngwaahịa na mgbakwunye mobiles.
Kedu ụdị nke Blackberry ga-eweta n'izu ọzọ?
Eziokwu bụ na anyị ga-ahụ ma ọ bụ hụ ọhụụ ọhụrụ Blackberry mobile n'izu na-abịa, ọ dị ka ọ bụ ụlọ ọrụ na-ịkụ nzọ ihe niile na gam akporo nakwa na o nwere ọtụtụ ụdị n'ime ụlọ iji malite na ọnwa ndị na-abịanụ, mana ihe ụdị?
Ugbu a anyị maara Neon a ma ama, Argon na Mercury, mana anyi nwekwara ozi banyere aha ndi ozo dika Hamburg na Rome n’echefughi na ulo oru ahu ekwuputala na ga-ewetara ọhụrụ ụdị na Blackberry OS 10. N'aka ozo, otutu onu ogugu, mana kedu nke ga-adi n'ahia?
Echere m na ha ga-ebupụta Blackberry Neon ma ọ bụ Mercury, ngwaọrụ dị n'etiti nakwa na ha nwere ntakịrị ihe jikọrọ ya na Blackberry Priv, ya mere ha ga-enwe akara ngosi dị elu na ahịa na ụdị nke ọzọ dị n'etiti. Agbanyeghị Blackberry enweghị ike ịkọwa amụma na ọ nwere ike iju anyị anya n'oge a Kedu ihe ị chere?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Enwere ike igosi igwe ojii ọhụrụ n’izuụka ọzọ
Microsoft na-akwado ọdịda Windows Phone mana ọrụ igwe ojii ya na-abawanye nke ukwuu